Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo | Goynta | Diidmada Ellicott
Nooc noocee ah ayaa lagu hayaa?
Waxaan kaydineynaa ku dhawaad ​​dhamaan heerarkayaga sheyga caadiga ah ee qodista jeexan googo'yaha, laga bilaabo 8 ”(200 mm) Taxanaha 360SL Swinging Dragon® Dredge 8 ″ to the 20 ”(500 mm) Taxanaha 2070 Dragon® qodid Doomaha waaweyn iyo cutubyada gaarka loo leeyahay ayaa loo dhisay halkii amar macaamiil.
Baaxad intee le'eg ayaan u baahan doonaa inaan shaqadayda sameeyo?
Waxay kuxiran tahay shuruudaha mashruuca gaarka ah. Fadlan dhameystirkeena Weydiimaha Xogta ee Mashruuca si ay noogu suurtogasho inaan dib u eegno faahfaahinta mashruucaaga oo aan ku siinno talo bixin buuxda.
Qulqulka mashiinka weyn miyuu shidaal badan helayaa?
Khasab maaha. Isticmaalka shidaalku wuxuu inta badan ku tiirsan yahay xuduudaha hawlgalka qulqulaya, sida cufnaanta maaddada, masaafada matoorka, iyo sare u qaadista masruufka.
Intee in le'eg ayey tuubooyinkaaga biyuhu qodaan?
Standard Dheecaannada taxanaha ee Ellicott® Hayso mashiin iyo mashiinno mashiin ah oo loo doorto wax soo saar hufan oo u dhexeeya 2,625 ′ (800 m) iyo 3,280 ′ (1,000 m).
Ellicott ma bixisaa Anchor Booms iyo Spud Carriages?
Haa. Ellicott waxay bixisaa Barroosinka Barbaraha iyo Gawaarida loo yaqaan 'Spud Carriages' oo loo dhisay si loo dalbado. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la xiriir Ellicott.
Moolkee qoto dheer oo qulqulayaadu ay gaari karaan?
Waxaan bixinaa qulqulo jajab ah oo jajab ah oo leh awood qodis kala duwan oo qotodheer leh oo laga soo bilaabo 20 ft. (6 m) ilaa 60 ft. (18.2 m), waxay kuxirantahay moodada dredge. Codsiyada khaaska ah, qoditaanka qodista waa la kordhin karaa si weyn.
Halkeen ka heli karaa qaybaha beddelka dheellitirka?
Ellicott wuxuu hayaa tiro badan oo beddelaad ah qeybo kala duwan xarumahayada wax soo saarka ee u rarka meel kasta oo adduunka ah. La xiriir waaxdayada qeybta at + 1 410 545 0239 ama qaybo@dredge.com.
Mudo intee leeg ayay qaadataa in la dhiso tuulmo?
Our jaranjarada goynta goynta caadiga ah guud ahaan waxaa laga heli karaa saamiyada, maaddada kahor iibinta. Haddii saamiga aan la heli karin, dhammaystirka caadiga ahi wuxuu noqon doonaa 3 illaa 4 bilood kadib helitaanka amar. Gaarsiinta qalabka waaweyn way kala duwan tahay taas oo kuxiran soo saarida culeyska shaqada sida kala nidaamsan.
Ellicott ma booqan kartaa warshadeena ama goobta mashruuca?
Maamulaha iibka gobolka ayaa diyaar u ah inuu kugula kulmo bartaada ama xafiiskayaga, hadba mid ku habboon.
Waa maxay sababta aysan u jirin "sharciyo liin" ah oo lagu ilaaliyo iibsadaha alaabada qashinka?
“U ogolow iibsaduhu” ​​inuu iska ilaaliyo maahan oraah oo keliya, laakiin waa run marka la iibsanayo ama la kiraysanayo qashin. Ma jiro wax ilaalin ah, iibsadaha waa inuu ku tiirsanaadaa soo saaraha qashin qubka. Ellicott waligiis tayada uma bixin doono qiimo ahaan. In ka badan 2,200 oo ah nooca loo yaqaan Ellicott® ayaa la dhisay intii u dambeysay 125 sano. Qaar ka mid ah calaamadaha Ellicott® wali waxay ka shaqeeyaan adduunka oo dhan ka dib 50 + sano oo hawlgal ah.